Bulshooyinka ku Dhaqan-galka ah ee Dhaqan-ku-Dhaqanka ah ee Macnahoodu yahay Wadaagista iyo Abuurista Aqoonta si loo Xoojiyo Awoodda La Qabsiga Nidaamyada
By Dib-u-eegista Aasaasiga
Bulshooyinka la qorsheeyay ee ku-dhaqanka waxay noqon karaan habab wax ku ool ah oo lagu faafiyo laguna abuuro aqoon. Maqaalkani wuxuu sahminayaa heerka ay bulshooyinka ku dhaqankoodu ka bilaabi karaan maalgeliyeyaasha, wuxuuna soo bandhigayaa casharradii laga bartay iyo natiijooyinka laga gaadhay ballanqaadkii muddada dheer ee fikraddan ay sameeyeen Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagyada Wadajirka ah ee Machadka McKnight Foundation.
Maqaalkani wuxuu ku siinayaa wax ku ool ah suugaanta isagoo muujinaya in maalgeliyuhu uu bilaabi karo, taageeri karo, kana qayb geli karo bulsho ku dhaqan ka kooban deeq bixiyayaasheeda, oo ku guuleysan kara wadaagista iyo abuurista aqoonta. Waxyaabaha ay tahay in ururradu tixgeliyaan markay baarayaan fikraddan waxaa ka mid ah maal-gashiga muddada-dheer ee shirarka iyo fududeynta, iyo sidoo kale ka tanaasulka xoogaa xakameynta natiijooyinka ah.
Cilmi baaris ayaa muujisay in bulshada ku dhaqanka barnaamijka McKnight ay fursad u siisay jilayaasha kala duwan ee Afrika iyo gobolka Andes si ay u horumariyaan awooda la qabsiga ee la xiriirta baaritaanka nidaamka cunnada iyo waxqabadka barashada bulshada. Maaddaama maalgeliyeyaashu ay si sii kordheysa u eegaan banaanka caqliga caadiga ah ee mashaariicda si ay u sahamiyaan sida ay gacan uga geysan karaan awood u siinta xaaladaha muddada-dheer iyo awoodda is-beddelka iyo la-qabsiga, bulshooyinka si wanaagsan loo taageeray loona fududeeyay waxqabadka waxay bixiyaan hanaan rajo leh.
Daliil ururintu waa Dadaal Ballaaran